What is Performance Appraisal? Its Objectives and Advantages ﻿
What is Performance Appraisal? Its Objectives and Advantages
Tags: Performance Appraisal-JobsInYangon
စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်ခြင်း ( Performance Appraisal) ဆိုတာကတော့ လူတစ်ယောက်ဆက်လက် တိုးတက်ဖို့ အတွက် လိုအပ်တဲ့စွမ်းရည်(လုပ်နိုင်စွမ်း) တွေကိုနားလည်ဖို့နဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို စည်းစနစ်ကျကျ တန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်ခြင်း ( Performance Appraisal)ကို အောက်ပါ နည်းလမ်းများအတိုင်း စနစ်တကျပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။
၁။ ကြီးကြပ်သူတွေဟာ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လစာငွေတွေကို တိုင်းတာတွက်ချက်ပြီး ဦးတည်ချက်တွေ၊အစီအစဉ်တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပါတယ်။
၂။ ကြီးကြပ်သူတွေဟာ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လုပ်ငန်းခွင်စွမ်းဆောင်ရည်တွေရဲ့ နောက်ကွယ်က အကြောင်းတရားတွေကို စီစစ်လေ့လာကြပါတယ်။
၃။ လုပ်ငန်းရှင်တွေက ဝန်ထမ်းတွေကို ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေရရှိလာနိုင်ဖို့ လမ်းညွှန်ပြသပေးနိုင်တဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေပါတယ်။
Objectives of Performance Appraisal (စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်ခြင်း ( Performance Appraisal)၏ ရည်ရွယ်ချက်များ)
စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်ခြင်း ( Performance Appraisal) ကို အောက်ပါအချက်များကို စိတ်ထဲမှာ မှတ်သားထားပြီး ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
၁။ အပိုဆောင်းငွေပေးချေမှု ပုံစံများ (Compensation Packages)၊ လစာငွေပေးချေမှု ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ(Wage Structure) နှင့် လစာငွေတိုးမြှင့်မှု(Salaries Raises) အစရှိသည်တို့ကို သတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက် မှတ်တမ်းများထားရှိရန်။
၂။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ လူမှန်၊နေရာမှန် ဖြစ်ဖို့အတွက် ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အားသာချက်တွေ၊ အားနည်းချက်တွေကို သတ်မှတ်ထားရန်။
၃။ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက် ပိုမိုတိုးတက်အောင်မြင်လာဖို့အတွက် ထိုသူရဲ့(မွေးရာပါ)အားသာချက်ကို ထိန်းသိမ်းထားရန် နှင့် စစ်ဆေးရန်။
၄။ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ဆက်စပ်နေသော ရာထူးနေရာနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်များပေးရန်။
၅။ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ဆက်စပ်နေသော ရာထူးနေရာနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်များပေးရန်။
၆။ စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်ခြင်း ( Performance Appraisal)ကို ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့အလေ့အထတွေကို လွှမ်းမိုးအားပေးရန်အတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
၇။ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် အခြားသော မွမ်းမံသင်တန်း ( Training Programs) တို့ကိုထိန်းသိမ်းထားရန်နှင့် ပြန်လည်စစ်ဆေးရန် - အစရှိသည်တို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
Advantages of Performance Appraisal ( စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်ခြင်း ( Performance Appraisal)၏ အားသာချက်များ)
စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်ခြင်း ( Performance Appraisal)ဟာ ကုမ္ပဏီအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်တယ် ဆိုတာကို အောက်ပါအားသာချက်တွေနဲ့ သက်သေခံထောက်ပြပေးလို့ရပါတယ်။
၁။ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း - စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်ခြင်း ( Performance Appraisal)ဟာ ကြီးကြပ်သူတွေကို ကျွမ်းကျင်(အကျိုးရှိ)တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ရွေးထုတ်ဖို့နဲ့ မကျွမ်းကျင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို ထုတ်ပစ်ဖို့ သို့မဟုတ် ရာထူးလျော့ချဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
၂။ အပိုဆောင်းငွေပေးချေမှု - စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်ခြင်း ( Performance Appraisal)ဟာ ဝန်ထမ်းတွေအတွက် အပိုဆောင်းငွေပေးချေမှုတွေ ပြုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာလည်းကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ခြင်း (Merit Rating)ခြင်းကိုပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်း အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်ခြင်းဟာ စွမ်းဆောင်ရည်တစ်ခုကို တန်ဖိုးသတ်မှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဘောနပ်စ် (Bonus)၊ မြင့်မားတဲ့လစာငွေနှုန်းထား (High Salary Rate)၊ အပိုထပ်ဆောင်းအကျိုးအမြတ်(Extra Benefits)၊ ထောက်ပံ့ကြေး(Allowance) နဲ့ ကြိုသုံးငွေ (Pre-requisites) တို့ကဲ့သို့သော အပိုထပ်ဆောင်းပေးချေမှု (Compensation Packages) တွေဟာလည်း စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်ခြင်းအပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်။ ဒီခံစားခွင့်တွေဟာ အရည်အချင်းအပေါ်မှာသာ မူတည်သင့်ပြီး လုပ်သက်(Seniority) အပေါ်မှာ မူ မတည်သင့်ပါ။
၃။ ဝန်ထမ်းစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှု - စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်ခြင်းရဲ့ စည်းစနစ်တကျလုပ်ဆောင်ပုံဟာ ကြီးကြပ်သူတွေကို မွမ်းမံသင်တန်းအတွက် ပေါ်လစီနဲ့အစီအစဉ် တွေသတ်မှတ်ရာမှာ ကူညီပေးပါတယ်။ ၎င်းဟာ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အားသာချက်၊အားနည်းချက်တွေကို စီစစ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းတွေအတွက် အလုပ်တာဝန်အသစ်တွေ ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းဟာ အနာဂါတ်တိုးတက်မှုအစီအစဉ်တွေကို သတ်မှတ်တဲ့ နေရာမှာလည်း အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။
၄။ကျိုးကြောင်းညီညွတ်သော ရွေးချယ်မှု - စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်ခြင်း ( Performance Appraisal)ဟာ ရွေးချယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ အရေးကြီးမှုနဲ့ ကျိုးကြောင်းညီညွတ်မှု(Validity)ကို ကြီးကြပ်သူတွေနားလည်နိုင်အောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ကြီးကြပ်သူတွေဟာ ကျိုးကြောင်းညီညွှတ်မှု(Validity)ကို နားလည်လာတဲ့အခါမှာ ရွေးချယ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ အားသာချက်၊အားနည်းချက်တွေကိုပါ နားလည်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အနာဂတ်မှာ ရွေးချယ်မှုနည်းလမ်းတွေနဲ့ပါတ်သက်ပြီး အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်လို့ရပါတယ်။
၅။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး - အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက် အလုပ်ရှင်နဲ့ ဝန်ထမ်းများအကြား ထိရောက်မှုရှိတဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဟာ အလွန်ဘဲအရေးကြီးပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်ခြင်း ( Performance Appraisal)ကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို အောက်ပါနည်းလမ်းများအတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
(က) စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်ခြင်းကြောင့် အလုပ်ရှင်ဟာ လက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့ကျွမ်းကျင်မှု(Skill) ကို သိရှိလက်ခံလာနိုင်ပါတယ်။
(ခ) လက်အောက်ငယ်သားတွေအနေနဲ့လည်း ကြီးကြပ်သူတွေကိုနားလည်လာနိုင်ပြီး ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖန်တီး လို့ရလာနိုင်ပါတယ်။
(ဂ) လှိုက်လှဲပျူငှာပြီး သဟဇာတဖြစ်တဲ့ စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံတစ်ကို ထိန်းထားနိုင်ဖို့အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
(ဃ) ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်နဲ့ စိတ်ဓါတ်ရေးရာကောင်းမွန်မှုကို အားပေးနိုင်ပါသည်။
၆။ စိတ်ဓါတ်ခွန်အား - စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်ခြင်း ( Performance Appraisal)ဟာ စိတ်ဓါတ်ခွန်အားကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကဲဖြတ်ခြင်းအားဖြင့် လိုအပ်တဲ့ရလာဒ်ကို ရရှိအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်သလားဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုကိုဆုံးဖြတ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဟာ လူတစ်ယောက်ကို ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့ စိတ်ဓါတ်ခွန်အားပေးနိုင်ပြီး အနာဂါတ်မှာ သူ့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ဖို့ ကူညီနိုင်ပါသည်။